Maitiro ekuchengetedza mabhureki panguva yekumhanya-mukati
Nekuda kwekukurumidza kukura uye kukura kwehunyanzvi kugadzirwa uye kugadzirisa, uye zvishoma nezvishoma kuvandudzwa kwemuchina michina munzvimbo dzakasiyana siyana, izvo zvinodiwa kune chishandiso chayo michina iri kuramba ichikwira uye ichikwira. Izvo zvinofanirwa kuzivikanwa kuti zvigadzirwa zveakakura mabhureki vagadziri ar ...
Chengetedzo yekushanda kweanotyora
Iyo breaker ndeimwe yemidziyo inowanzoshandiswa muzvicherwa. Kuti itambe basa rayo mukureba-uye ive chishandiso chakakodzera, inofanirwa kushandiswa uye kuchengetedzwa nemazvo semamwe maturusi. Nekudaro, kushaya hanya nehumwe ruzivo uye kusajairika mashandiro panguva yekushandiswa kuchave nekukanganisa kwakashata pane yedu larg ...
Nzira yekusarudza mudariki
Simba rekutyora ndiro rinochera uye kurodha. Vanogona kubvisa zvinobudirira ivhu mumakakatanwa ari pakati pebwe repumice nedombo, nokudaro vachitamba chinzvimbo chekuchera hwaro hwechivakwa. Paunenge uchisarudza yakakura breaker, zvinotevera nyaya zvinofanirwa kutariswa: 1 ...